#बालबालिका | Suvadin !
एजेन्सी । कतिपय अवस्थामा हामी बच्चाले बोलेको झुटो सत्य हो भनी पत्याउँछौं। किनभने बच्चाले कहिले पनि झुटो बोल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ। तर बच्चाले बोलेको केही कुरा गहिरेर जान्ने–बुझ्ने हो भने पक्कै नयाँ झुटो भेटिने सम्भावना हुन्छ। बच्चाले झुटो बोल्नु कुनै नयाँ विषय होइन्। बच्चाहरु...
Suvadin Media 765 0
काठमाडौं । भिडियो शेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबले आफ्नो सेटिङमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । युट्युबले मुद्रीकरण प्रक्रिया तथा सामग्री पत्ता लाग्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्न सक्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न लागेको जानकारी गराएको छ । बालबालिकाहरूको अनलाइन गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने ऐन र अन्य प्रचलित क...
काठमाडौं । सरकारले आगामी कात्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी कात्तिक २ र ३ गते राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै समन्वयका लागि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सरकारले राष...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा नेपाली मौलिक पोशाकमा सजिएर लहरै बसेका ४९ स्कूले बालबालिकाले चिनियाँ भाषामा स्वागत गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ प्रफुल्लित भए। आफ्नै भाषामा स्वागत पाउँदाको खुशी उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो। गुन्यू र चोली लगाएका बालिका र नेपाली टो...
Suvadin Media 146 0
बालबालिकालाई राम्रो बनाउने बहानामा, अनुशासित बनाउने चक्करमा हामी उनीहरुलाई कतिपय काममा नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । यो गर, त्यो नगर भनिरहेका हुन्छौं । त्यती मात्र होइन, बच्चाले गर्ने हरेक गतिविधिमा हामी निगरानी गरिरहेका हुन्छौं । उनीहरु कहाँ खेल्छन्, के खेल्छन्, कोसँग बोल्छन्, के लेख्छन्, कहाँ जा...
चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार
काठमाडौं । मुलुकमा चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका बढी हिंसाको सिकार भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सोमबार ‘जबर्जस्ती करणीमा परेका महिलाको मानवअधिकार एवं न्याय पहुँचमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ मा नेपालमा उक्त उमेर समूहका बालिका हिंसाक...
Suvadin Media 137 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराउने आमाको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान नगराउँदा शिशुको मृत्यु हुने सम्भावना तीन गुणा बढी हुने पोषणविद्हरु बताउँछन् । पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतिले स्तनपान गराउँदा आमा र शिशु दुबैलाई फाइदा हुने बताउँछिन्। “स्तनपान ज...
कतिपय अवस्थामा हामी बच्चाले बोलेको झुटो सत्य हो भनी पत्याउँछौं। किनभने बच्चाले कहिले पनि झुटो बोल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ। तर बच्चाले बोलेको केही कुरा गहिरेर जान्ने–बुझ्ने हो भने पक्कै नयाँ झुटो भेटिने सम्भावना हुन्छ। बच्चाले झुटो बोल्नु कुनै नयाँ विषय होइन्। बच्चाहरुको सोच्ने...
महोत्तरी । महोत्तरीमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा डुबेर मृत्यु हुनेमा बालबालिकाको सङ्ख्या कहालीलाग्दो देखिन्छ । बितेको वर्ष दिनको अवधिमा १० महीनादेखि १२ वर्ष उमेरभित्रका १८ को डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको हो । गत आव २०७५-७६ मा बगेर र डुबेर मृत्यु हुने २७ को मृत्...
DilipKarki 741 0
बालबालिकाको अगाडि अभिभावकले कति बोल्‍नु‍‍‍पर्छ ?
एजेन्सी । एक नयाँ अध्ययनपछि सबै अभिभावकहरुलाई आफ्ना बालबालिकाका अगाडि धेरै बोल्ने गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । बच्चाहरुले हामीले बोलेको धेरै सुनिरहँदा यसले बौद्धिक क्षमता बढाउने र आइ–क्यु पनि वृद्धि गराउन सक्ने बताइएको छ । यसरी स्पष्ट बोल्न सुरु नगरेका दुईदेखि चार वर्षका बच्चाहरुमा पनि यसल...
काठमाडौंका सडकबाट १४१ बालबालिकाको उद्धार, 'घर फर्किन मान्दैनन्'
काठमाडौं । काठमाडौँमा पछिल्लो ६ महीनाको अवधिमा १० पटक रात्रिकालीन अभियान चलाएर सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी भयो । उक्त अभियानमा उद्धार गरिएका १५६ बालबालिकामध्ये १५ जना मात्रै परिवारमा फर्किन चाहे । घर जान नमान्ने १४१ बालबालिका उपत्यकाका विभिन्न पुनःस्थापनगृहमा राखिएको छ । काठमाडौँको ठमेलमा...
थाहा पाउनुहोस्, बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने र सिकाउने ?
हामी हाम्रो बच्चा अरुभन्दा अब्बल होस्, सफल होस्, सधैं जितोस्, ठूलो मान्छे बनोस् भन्‍ने चाहन्छौं । हाम्रो चाहनाहरु बच्चलाई थोपार्छौं तर परिस्थिति बुझेर अघि बढ्‍नसक्ने होस् भन्‍नेतिर ध्यान नै दिँदैनौं । उसलाई परनिर्भर बनाएर राख्‍छौं । जसले गर्दा भोलिका दिनमा उसले समस्याको समाधान गर्न स...
DilipKarki 355 0
बालबालिका कतिसम्म चकचके हुनुपर्छ ?
काठमाडौं । अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका धेरै चकचके भएको, पढाइमा ध्यान नदिने, भनेको नमान्ने गरेको भन्दै चिन्ता गरिरहँदा विज्ञहरूले चाहिँ त्यसमा अभिभावकले नै बालबालिकालाई दिइरहेको वातावरण उचित नभएको हुनसक्ने बताएका छन्। हालसालै एउटा विद्यालयले एकजना बालकलाई धेरै चकचके भएको भन्दै आफ्नो विद्यालयमा पढ...
DilipKarki 576 0